विनय-अनितहरूले नाटक गरिरहेका छन्ः सञ्जीव - Samay Dainik
बितेको लोकसभा र विधानसभा उपचुनाउमा नराम्रो घतले हार भएपछि अहिले आएर विनय तामाङ-अनित थापाहरूले नाटक गरिरहेको विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाका सांगठनिक सचिव सञ्जीव सुवेदीले आरोप लगाएका छन्। उनले यसबारे एक प्रसे बयान जारी गरेर भनेका छन्, वास्तवमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दाप्रति उनीहरू कहिल्यै पनि इमानदार थिएनन्। विकासको कुरा, चियाश्रमिकहरूको पर्जा-पट्टा, 105 दिनको हाजिरा साथै शिक्षक नियुक्ति जस्ता विषयहरूलाई लिएर चुनाउ लड्न तम्सिने विनय-अनितहरूले यसघडी गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्नु जनतालाई भ्रममा पार्नु सिवाय अरू केही होइन। यो विषय निभ्ने बेलामा बत्ती ठूलो बलेको जस्तो मात्र हो। आरपी वाइबा जस्ता बयोवृद्ध मानिसलाई पक्राउ गरेर बंगाल पुलिसले विभिन्न प्रकारका यातनाहरू दिँदा जीटीए प्रमुख अनित थापाले जुन बयान सार्वजनिक गरिरहेका छन्, त्यो गोहीको आँसु मात्र हो।
आरपी वाइबाको पक्राउमा उनीहरूकै हात छ। यति मात्र नभएर उनीहरूले गोर्खाल्याण्डप्रति जुन उत्सुकता देखाइरहेका छन्, त्यसले नै उनीहरूको चरित्र उदाङ्गो भइसकेको छ। जुन व्यक्तिहरूले चुनाउअघिसम्म गोर्खाल्याण्डको मागलाई पत्तो दिएनन् र जनतालाई केवल विकासको कुरामै अल्झाइराख्ने षड्यन्त्र गरे, उनीहरूले नै आज आएर गोर्खाल्याण्डको नाममा भावनात्मक खेल खेल्ने कसरत गरिरहेका छन्। किन? किनभने जनताले अब उनीहरूको झुटो राजनीति र ममता केन्द्रित विचारधाराको अर्थ बुझिसकेको कुरा उनीहरूले थाहा पाइसकेका छन्। उनले अघि भनेका छन्, यदि विनय-अनितहरूले गोर्खाल्याण्डप्रति इमानदारिता देखाएका हुन् भने जीटीए त्यागेर खुल्ला रूपमा सडकमा आएर देखाउन्। सक्छन्? सक्दैनन्। जुन जीटीएलाई जनताले नै खारेज गरिसकेका छन्, त्यसैमा विराजमान भएर ममताको दयामाया र भीखमा बाँचेर गोर्खाल्याण्ड भन्नु चाहिँ उनीहरूले लाज पचाउने काम गरेका हुन्। यदि उनीहरू गोर्खाल्याण्डको साँचो समर्थक भएका भए विमल गुरुङ जस्ता गोर्खा जातिको हित सोंच्ने मान्छे आजसम्म यसरी भूमिगत हुनुपर्ने थिएन। असंख्य गोर्खाल्याण्डप्रेमीहरू आ-आफ्नो घर-परिवार र जन्मस्थलदेखि टाडा हुनपर्ने थिएनन्।
आज जनमत गुमाएपछि एक्कासी सपनामा धताएको जस्तो गोर्खाल्याण्ड भन्नु विनय-अनितहरूको नैतिकता नभएर केवल सत्ता बँचाइराख्ने चाहना मात्र रहेको कुरा स्पष्ट देखिँदैछ। गोर्खाल्याण्ड भनेको जनसपना वा जनआकांक्षाको चरम सीमा हो। दुइ पैसा र उच्च पदको लालचमा स्वाभिमान बेच्ने नेताहरूको टुँडीखेल होइन। यो कुरा अनित-विनयहरूले बुझुन्। पापाको पनि लोभ र चीचीको पनि लोभ गर्ने उनीहरू जस्ता जबर्जस्ती नेता बन्न खोज्नेहरूले गोर्खाल्याण्ड जस्तो पवित्र शब्दलाई उच्चारण गर्न पनि मिल्दैन। यसको निम्ति त त्याग र समर्पण चाहिन्छ, जुन कुरा विमल गुरुङले आफू टाडा रहेर पनि जनताको विचारलाई मर्न नदिएर सिद्ध गरिसकेका छन्। भोलिको दिनमा जनताको भावनालाई कसरी कदर गर्नुपर्छ र कसरी शहीदहरूको उत्सर्गलाई न्याय दिनुपर्छ, त्यो हामीले सोंचिसकेका छौं। यसमा विनय-अनित जस्ता स्वार्थी र उनीहरूका हिमायतीहरूले टाउको दुखाउने कुरै छैन। प्रत्येक समय ममतालाई रिझाउनका निम्ति आफ्नै दाजु-भाइमाझ फुट ल्याएर र सम्पूर्ण पहाडभरि संत्रासको वातावरण सृजना गरेर के सत्यापित गर्न खोजिएको हो? यो कुरा जनतासामु स्पष्ट भइसकेको छ। बीपी बजगाईं, विनोद रसाइली, आरपी वाइबा, निमा तामाङहरूलाई पक्राएर विनय-अनितहरूले आफ्नो डरछेरूवा चरित्रको परिचय दिइसकेका छन्। उनले भनेका छन्, गोर्खाल्याण्डभन्दा ठूलो उनीहरूलाई ममताको गुण तिर्न साह्रो परिरहेको छ। यसैले पोष्टर टाँसेर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्ने योजनामा लिप्त छन्। साँचो रूपमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्नेहरू पोष्टरमा सीमित नरहेर मैदानमा उत्रिन्छन्। तर मैदानमा उत्रिने साहस विनय-अनितहरूमा पटक्कै छैन। केवल जनतालाई छल्नका निम्ति र जनताको भावनासँग खेल्नका निम्ति मात्र उनीहरूले विभिन्न प्रकारका योजनाहरू बनाइरहेका छन्। यसबाट जनता सधैं सतर्क रहनुपर्छ।
जोइण्ट फोरमले बुझाउने ज्ञापनः
Total views : 1082149